13 02 2010 Naannoo Oromiyaa godina Buunoo Beddelleetti sababii hiriiratiin hokkorri uumamee ture tasgabbaa'uu isaa Biiroon Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ibse.
Yeroo ammaa jiraattonni aanaalee, humni nageenyaa fi jaarsoliin biyyaa dirmannaa taasisaniin, rakkinichi to'annaa jala oolee tasgabbiin uumameera jedhan hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaan.
Namoonni hokkoricharratti hirmaatan, lubbuun namaa fi qabeenyi akka badu harka keessaa qabanis hedduun isaanii to'annaa poolisii jala oolanii qorannaan irratti gaggeeffamaa jiraachuu himaniiru.
Mootummaan naannichaa toorichatti tasgabbiin akka bu'u, nageenyi waaraan akka uumamuu fi rakkooleen walfakkaataan akka irra deebiin hin mudanne cimee hojjechaa akka jirus himaniiru.
Rakkoo nageenyaa uumameen lammiilen 1500 ta'an Cooraa, Deeggaa fi magaalaa Beddellee da'ataniit jiru.
Ummannis nyaata, bishaanii fi deeggarsa barbaachisaa laachaafii jira.
Obbo Addisuun akka jedhanitti, yeroo ammaa ummata, jaarsolii biyyaa, humna nageenyaa fi hoggansa mootummaa waliin ta'uun lammiilen kanneen gara qayee isaaniitti akka deebi'an hojjetamaa jira.
Namoonni lubbuu isaanii dhaban 14 qaqqabeet ture.(OBN)
More in this category: « Rakkoo nageenyaa mudatu furuuf ga’een hawaasaa murteessadha –Obbo Isheetuu Dassee Rakkoon nageenyaa Buunoo badalleetti uumamee ture guutumaan guutuutti too’annoo jala ooleera: Doktar Nagarii Leencoo »
TV OROMIYA NOV-14-2016 Views : 2919
Torbe Kana 27214
Ji'a Kana 91705
01/05/07 irraa eggalee 3381312